အပူအစပ်တွေစားပြီး နေသာထိုင်သာရှိစေဖို့ နည်းလမ်း(၃)ခု – Gentleman Magazine
အပူအစပ်တွေစားပြီး နေသာထိုင်သာရှိစေဖို့ နည်းလမ်း(၃)ခု
အပူအစပျတှစေားပွီး နသောထိုငျသာရှိစဖေို့ နညျးလမျး(၃)ခု
အပူအစပ်များတဲ့ စားစရာတွေကို ကြိုက်ပါသလား ? စားပြီးလို့ ၀မ်းသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေလည်တဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒွါရပေါက်မှာ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်နေတာကိုရော ခံစားဖူးပါသလား ? ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက အပူအစပ်တွေ အစားများတဲ့အခါ မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ လူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ပြီး Bowel Syndrome, hemorrhoids ရောဂါအခံရှိတဲ့လူတွေမှာ ပိုပြီးတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် သင်ကြိုက်တဲ့အပူအစပ်တွေ လျှော့စားဖို့ စိတ်ကူးမနေပါနဲ့တော့။ စားချင်သလိုစားပြီး အဆင်ပြေနေစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ မီနူးကို အပြောင်းအလဲလေးလုပ်ပါ။
အပူအစပ်နဲ့ အဆီများတဲ့ စားစရာတွေကို အများကြီးမစားပါနဲ့။ အဆီဓာတ်များတာက ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဆီကိုချေဖျက်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးပြုတဲ့ သည်းခြေရည်က စအိုဝက အရေပြားကို ယားယံလာအောင် လှုံ့ဆောင်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ စားချင်သပဆိုရင်လည်း psyllium ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ် ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးတစ်ခုခုကို မစားခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် စားပြီးပြီးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကို ဒီကိစ္စပြောဖို့ မလိုဘူးလို့ ထင်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အပူအစပ်တွေစားပြီးနောက်မှာ ဒွါရပေါက်က ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်ပြီး ယားယံလာတယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဆပ်ပြာအပျော့စားနဲ့ ရေနွေးကိုသုံးပြီးဆေးကြောပါ။ သန့်ရှင်းသွားပြီဆိုရင် calamine ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ခရမ်တစ်ခုခုသုတ်လိမ်းထားပေးပါ။ ယားယံမှုနဲ့ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်တာ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှမသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ပါ။ စအိုဝနာကျင်မှုတွေက ပိုးဝင်တာ၊ စအိုဝကွဲတာ၊ ပြည်တည်တာနဲ့ စအိုကင်ဆာအထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မပေါ့ပါနဲ့။
၃။ သုံးပတ်ဆက်တိုက် ငရုတ်သီးအနီစားသုံးပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းကြီးလဲလို့ တွေးမိချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အပူအစပ်မစားရရင် မနေနိုင်သူတွေ အတွက်ကတော့ ဓာတ်ကြမ်းတိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပူအစပ်တွေကို နှစ်ရက်လောက် ဆက်တိုက်စားမယ်ဆိုရင် အူမကြီးတစ်လျှောက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး နာကျင်ပူလောင်မှုကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးပတ်လောက်အထိ ဆက်တိုက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဖြည်းဖြည်း အာရုံခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသွားပြီး နေသာထိုင်သာရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အူမကြီးနဲ့ ဒွါရပေါက်ကို အပူနဲ့လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပူအစပ်ဒဏ်ကို သုံးပတ်လောက် ခံစားပြီးရင် နောက်ဘယ်တော့မှာ ခံစားရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အပူအစပျမြားတဲ့ စားစရာတှကေို ကွိုကျပါသလား ? စားပွီးလို့ ဝမျးသှားတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ လလေညျတဲ့ အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ ဒှါရပေါကျမှာ ပူစပျပူလောငျဖွဈနတောကိုရော ခံစားဖူးပါသလား ? ဟုတျပါတယျ။ ဒီကိစ်စက အပူအစပျတှေ အစားမြားတဲ့အခါ မလှဲမသှကွေုံတှရေ့တတျတဲ့ ကိစ်စတဈခုပါ။ လူတိုငျးမှာဖွဈနိုငျပွီး Bowel Syndrome, hemorrhoids ရောဂါအခံရှိတဲ့လူတှမှော ပိုပွီးတော့ ဆိုးဆိုးရှားရှားခံစားရတတျပါတယျ။ ဒီလိုမဖွဈအောငျ သငျကွိုကျတဲ့အပူအစပျတှေ လြှော့စားဖို့ စိတျကူးမနပေါနဲ့တော့။ စားခငျြသလိုစားပွီး အဆငျပွနေစေမေယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ မီနူးကို အပွောငျးအလဲလေးလုပျပါ။
အပူအစပျနဲ့ အဆီမြားတဲ့ စားစရာတှကေို အမြားကွီးမစားပါနဲ့။ အဆီဓာတျမြားတာက ပွဿနာရှိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အဆီကိုခဖြေကျြဖို့ ခန်ဓာကိုယျကအသုံးပွုတဲ့ သညျးခွရေညျက စအိုဝက အရပွေားကို ယားယံလာအောငျ လှုံ့ဆောငျပေးနိုငျတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍ စားခငျြသပဆိုရငျလညျး psyllium ဓာတျပါဝငျတဲ့ အမြှငျဓာတျ ဖွညျ့စှကျဆေးဝါးတဈခုခုကို မစားခငျမှာပဲဖွဈဖွဈ စားပွီးပွီးခငျြးပဲဖွဈဖွဈ သောကျသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
အရှယျရောကျပွီးသူတှကေို ဒီကိစ်စပွောဖို့ မလိုဘူးလို့ ထငျခငျြစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ အပူအစပျတှစေားပွီးနောကျမှာ ဒှါရပေါကျက ပူစပျပူလောငျဖွဈပွီး ယားယံလာတယျဆိုရငျ တတျနိုငျသမြှမွနျမွနျသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ဆပျပွာအပြော့စားနဲ့ ရနှေေးကိုသုံးပွီးဆေးကွောပါ။ သနျ့ရှငျးသှားပွီဆိုရငျ calamine ဓာတျပါဝငျတဲ့ ခရမျတဈခုခုသုတျလိမျးထားပေးပါ။ ယားယံမှုနဲ့ ပူစပျပူလောငျဖွဈတာ သကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုမှမသကျသာဘူးဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ပွကွညျ့ပါ။ စအိုဝနာကငျြမှုတှကေ ပိုးဝငျတာ၊ စအိုဝကှဲတာ၊ ပွညျတညျတာနဲ့ စအိုကငျဆာအထိဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ မပေါ့ပါနဲ့။
၃။ သုံးပတျဆကျတိုကျ ငရုတျသီးအနီစားသုံးပါ။
ဟုတျပါတယျ။ ဘယျလိုနညျးလမျးကွီးလဲလို့ တှေးမိခငျြစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ အပူအစပျမစားရရငျ မနနေိုငျသူတှေ အတှကျကတော့ ဓာတျကွမျးတိုကျတဲ့သဘောပဲဖွဈပါတယျ။ အပူအစပျတှကေို နှဈရကျလောကျ ဆကျတိုကျစားမယျဆိုရငျ အူမကွီးတဈလြှောကျအာရုံခံနိုငျစှမျးကို လှုံ့ဆျောပေးပွီး နာကငျြပူလောငျမှုကို ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သုံးပတျလောကျအထိ ဆကျတိုကျစားမယျဆိုရငျတော့ တဈဖွညျးဖွညျး အာရုံခံနိုငျစှမျးလြော့နညျးသှားပွီး နသောထိုငျသာရှိသှားမှာဖွဈပါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ အူမကွီးနဲ့ ဒှါရပေါကျကို အပူနဲ့လကေ့ငျြ့ပေးလိုကျတဲ့ သဘောပဲဖွဈပါတယျ။ အပူအစပျဒဏျကို သုံးပတျလောကျ ခံစားပွီးရငျ နောကျဘယျတော့မှာ ခံစားရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
Previous: သင့်ကို သူမတိတ်တခိုးချစ်နေကြောင်း သိရှိနိုင်မည့် လက္ခဏာများ
Next: သင့်ရဲ့*#^! နဲ့ပက်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေတွေးမိသလဲ